तपाईलाई टाउको दुख्छ ? यस्तो गर्नुहोस् खानपान ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईलाई टाउको दुख्छ ? यस्तो गर्नुहोस् खानपान !
अलिअलि टाउको दुख्दैमा औषधि सेवन गरिहाल्नुहुँदैन । अत्यधिक एन्टिबायोटिकको प्रयोगले शरीरमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ । टाउको दुख्ने समस्यालाई विभिन्न तरिकाले निको पार्न सकिन्छ ।
भदौ २५ गते, २०७७ - ०९:४५ मा प्रकाशित